လင်္ကာ: လဒနှင့် အင်တာဖြီးခြင်း
[သွန်းနေစိုး] မေး - အိုင်ဆေး မစ္စတာလဒ။ ခဏလေးနေပါဦး အင်တာလေး ဗျူးပါရစေ။ ဖြေ - အာရုံပဲကွာ၊ ကဲ ကဲ။ ပြော ပြော။ ဘာမေးမှာလဲ။ မေး - ခင်ဗျားတို့ ဒီကို ဘယ်နှစ်ကောင်လာကြတာတုန်း။ ဖြေ - လာတုန်းကတော့ အကောင်၂၀။ ကျန်တဲ့ကောင်တွေက မြန်မာသံရုံးမှာ တုံးထုနေတာ စိတ်မရှည်လို့ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ မေး - ခင်ဗျားတို့ ဘာကိစ္စလာတာတုန်း။
ဖြေ - ဟာ ငါတို့က ဆောင်းခိုငှက်တွေလေ။ ဒီလိုပဲ ရေပြောင်း မြေပြောင်းလာမိတာပါကွာ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူး။ အထင်တော် မလွဲလိုက်ပါနဲ့။ မေး - ဒါတော့ ဒါပေါ့ဗျာ။ အခု ခင်ဗျားတို့ လာလိုက်တော့ ဂျာနယ်တွေ အလုပ်များကုန်ပြီဗျ။ ဖြေ - ဟေ ဟုတ်လား။ ဒါဆို ငါတို့ ဂျာနယ်ကျော်ကြီးတွေ ဖြစ်ပြီပေါ့။ မေး - ဟုတ်ပဗျာ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့က နိမိတ်မကောင်းဘူးဆို ဖြေ - မင်း ... ဘယ်သူပြောတုန်း။ မေး - ဒီလိုပဲပေါ့။ ခိုင်လုံတိကျတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က ...။
ဖြေ - နင့်ဘိုးအေ။ ခိုင်လုံတိကျတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်ပါလား။ ငါတို့လဲ ငှက်ပဲဟာ ဘာနိမိတ် မကောင်းတာတွေ ကောင်းတာတွေ ရှိရဦးမှာလဲ။ မင်းတို့ကွာ ငှက်ချင်းတူတူ ဇီးကွက်ကျတော့ လာဘ်ကောင်ဇီးကွက်တဲ့။ နိမိတ်ကောင်းတယ်တဲ့။ နာမည်ကိုက စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ ဇီးတွေကို လိုက်ကွက်တာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတွေအတွက် ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်မလဲ။ မေး - ဟေ့ လဒ။ ခင်ဗျား မဆိုင်တာတွေ လိုက်မပုတ်ခတ်နဲ့လေ။ ခင်ဗျားလဲတဖြည်းဖြည်း ဖွဘုတ်က ဟိုလူတွေနဲ့ တူလာပြီ။
ဖြေ - ပြောတယ်ကွာ။ ဘာဖြစ်တုန်း။ မင်းတို့ဟာက မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငှက်ချင်းတူတူ
ညမှ ထွက်ရဲတဲ့ ငကြောက်ကျတော့ လာဘ်ကောင်တဲ့။ ကျုပ်တို့က ဘာ နိမိတ်မကောင်းရအောင် နင့် ထမင်းအိုး တုတ်နဲ့ ထိုးနေလို့လား။ မေး - ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပဲ ဖြေပေးပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီရောက်လာရတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ...
ဖြေ - ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဘူးဟေ့၊ ရောက်ချင်လို့ ရောက်လာတာ ရှင်းပြီလား။ ဒီလိုပဲ ဆောင်းခိုငှက် ဆောင်းတွင်းရောက်တယ်။ လူသူ ဝေးတဲ့ ခပ်မြင့်မြင့်တစ်နေရာမှာ တက်နားတယ်၊ ဒါကို လျှာရှည်ပြီး ထပ်မေးချင်ဦး၊ ကဲဟာ ကဲဟာ ... ဤတွင် လဒများ လိုက်ထိုးသဖြင့် ပုဆိုးကွင်းသိုင်း ထွက်ပြေးရလေ၏။https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310756795703206&set=a.142704969175057.25404.100003066649195&type=1&theater Posted by
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း သို့ မဟုတ် လူသားခြင်းကျွန်ပြ...
(The Hidden Agenda to falsely charge Genocide)
တစ်ကျပ်ခွဲတန်း ၁၅၀ တန်း က ကောင်တွေ
လက်ညှိုးထိပ်မှာ နှလုံးသားနဲ့ဦးနှောက်ကိုတင်ထားသူ (...
KIA အဖွဲ့ များ ခရစ္စမတ်နေ့ ကို နောက်ဆုံးထား၍ နောက်...
links ( 24 December 2012 )
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မြူတွေဝေ .....(အောင်မိုးဝင်း)
Students remember girl, 16, allegedly stabbed to death byaboy at prom with anniversary celebration in her honor
On Saturday, Johnathon Law High School in Connecticut remembered Maren Sanchez, 16, allegedly stabbed to death at prom last year by rejected classmate Chri...
ကွမ်းလုံတိုက်ပွဲတွင်သူရဘွဲ့ ရ မာမူကြီး သူတောင်းစားပုဒ်မဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရ
ကွမ်းလုံတိုက်ပွဲတွင်သူရဘွဲ့ ရ မာမူကြီး သူတောင်းစားပုဒ်မဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရ https://www.youtube.com/watch?v=D49Bk57UeVw
Posted by The Melting Pot4U on Saturd...
အင်ဒိုနီးရှားမှာ မူးယစ်တရားခံအဖြစ် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး Mary Jane Veloso ရဲ့ မိသားစုဝင်များ။ (ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၅) အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ မူးယ...
Indonesian executions: 72-hour warning given
What time is the 2015 London Marathon today? Elite and amateur race start times
Whether you're taking part or watching it on TV, here's all the essential information for this year's 2015 Virgin London Marathon
UNFAIR TO FAMILIES? Republican support for death penalty shifting
ဘာသာရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ခန္တီတရား ၂ ပါး (၁)
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာ တရားတွေ အားလုံးက ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား၊ ဘာသာတရား တချို့ကပဲ ကိုက်ညီလေသလား ဆ...
Prime Minister Narendra Modi on Saturday madeapassionate plea to promote love for books while lamenting the absence ofaculture of reading which impedes...
A massive block of Earth’s crust, roughly 75 miles long and 37 miles wide, lurched 10 feet to the south Saturday over the course of 30 seconds. Riding atop...
နီပေါနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်လှုပ် လူ ၁၀၀၀ နီးပါး သေဆုံး ခဲ့
နီပေါ နိုင်ငံမှာ အင်အား ပြင်းထန်တဲ့ မြေငလျင် လှုပ်လို့ အခု အချိန် အထိ လူ ၁၀၀၀ နီးပါး သေဆုံး ခဲ့ပြီး၊ နောက်ထပ် အများ အပြား လည်း အပျက် အစီးတွေ အောက် ပိမိေ...
Akari Hmu Paing's "Yin Kwae Moe" Music Video Making
This is an exclusive video of "Yin Kwae Moe" Music Video Making by Director Nyo Min Lwin at Mya Khun Thar Park in Yangon on April 19, 2015. Thu Htoo San & ...
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများ
(sharing Dr. Maung Maung Gyi's post)
ကိုလိုနီခေတ်ကပညာရေးကို ကျွန်ပညာရေး လို့ဘဲ ခေါ်ခေါ် ဘာဘဲခေါ်ခေါ် ပညာရေးမှာ ကမ္ဘာ့ အဆင့်ကို ကောင်းကောင်...
နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြန်လေပြီ။ ယခုနှစ်သည်ကား မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ် ဖြစ်၏။ ယနေ့ (17/4/15) ၁၃၇၇၊ ဦးတန်ခူးလကွယ်နေ့သည်ကား မြန်မာနှစ်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြန်လာပြီ(အပိုင်း ၂)(ကဗျာရှင် ခရမ်းပြာထက်လူ)
*ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြန်လာပြီ(အပိုင်း ၂)(ကဗျာရှင် ခရမ်းပြာထက်လူ)*
ဟေ့.... ငါ့ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်
ယုတ်မာမှုကလွဲပြီး ဘယ်လိုမှ ဗုဒ္ဓသရဏံပန်းပင် ဦးခေါင်းတစ်လုံးရဲ့
ယုတ္တိယုတ္တာ လက်ပတ်အနီ မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင် ကျယ်ပြန့်သော တောအုပ်
ငါ ပြုတ်ကျသွားပြီ ခင်ဗျားပြ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အခါ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူတေ...
​အိ​န်ိဒ​ယ​နိုငျ​ငံ​မှာ ​နှ​လုံး​က ​ခ​န်ဓာ​ကိုယျ​အွပငျ​ဘကျ ​ငေါ​ထှကျ​နေ​တဲ့ ​က​လေး​မှေး​ဖှား
အိ​န်ိဒ​ယ​နိုငျ​ငံ Madhya Pradesh ​မှာ ​နှ​လုံး​ခ​န်ဓာ​ကိုယျ ​အွပငျ​ဘကျ​ရောကျ​နေ​တဲ့ ​မွကုံ​စ​ဖူး​ရော​ဂါ​တဈ​ခု​နဲ့​အ​တူ ​သ​မီး​လေး​တဈ​ယောကျ ​မှေး​ဖှား...
နည်းပညာနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီး လွှတ်တော်ကို အွန်လိုင်းကနေ စောင့်ကြည့်မယ်
လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးများတဲ့ Android Version နဲ့ Application ကိုပဲ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ iOS version သုံးနိုင်ဖို့ စီစဉ်သွားမယ်လိ...
At the end of one is begin of another ဒီနှစ်ကျနေရာက်တဲ့ (၅၂) နှစ်မြောက်ဆဲဗင်းဂျုလိုင်ခေါ် ဇူလိုင်ခုနှစ်ရက် ဗမာကျောင်းသားထုရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရေ...
Web Development (ဝဗျဆိုကျ တညျဆောကျရေး)
Amazing Ingenuity Systems
အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်သူ့ ခေတ် ဂျာနယ် အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၉ ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ မျက်ချင်းနုအုပ်စု၊ နန့်ဆောင်ဟူးကျေးရွာမှ တောင်သူများသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက ယနေ့အထိ စစ်တပ်မှ သိမ...
" သမိုင်း စာအုပ်များ " ၁။ မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး - ဦးကုလား http://www.mediafire.com/?u958zlksuy1cvmn ၂။ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း - နိုင်ပန်းလှ http://w...
Railway schedules between Mandalay Region and Myitkyina in Kachin State have been suspended as the government troops and Kachin Indepen...
AFP.com - Economie
AFP brinda 16 grandes servicios de información contrastada y difundida en tiempo real. Graciasasu red internacional yasu experiencia redaccional, AFP...
Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna intege...
ဘွိုင်းကောက်ဋီကာကြီး ( Download )
DOWNLOAD Ifile.it မနေ့က “ယူနီဘာစီတီ လေးချိုး” ( http://zayya.wordpress.com/2011/06/08/uni/ ) ၌ အကြောင်းကို မေးထားခြင်းကြောင့် အဖြေကို တင်ရှိပါသည်။ ယင်းလေးခ...
Best of the best Streaming Media and Daily Update Movies Website | Watch Free Movies, Karaoke VCD, Videos, Community and Entertainment
TOFLA - Top Myanmar Foreign Languages & Leadership Academy